Mila jerena ny tontolo Ambanivohitra - Madagascar Informations
Environnement Sociale & Culturelle
14 juin 2018 Madagascar Informations Aucun commentaire
kandida anisan’ny nilaza ny filatsahan-ko fidiana ampahibe maso Andriamatoa Mamy Raharimanana ny 28 Febroary lasa teo,tsiahivina fa izy no filoha mpanorina ny antoko politika Maeva na ny Madagasikara endrika vanona .
Noho ny fahitany ONG Madasun Dirm fa ao anatin’ny ady sarotra ny firenena amin’ izao fotoana izao ary maika ny fanarenana an’ny Madagasikara dia resy lahatra ny fikambanana fa izy no ho atolotra sy ho tohanana mandritra ny fifidianana filoham-pirenena ho tanterahina eto amintsika tsy ho ela .
Androany nidina nijery hifotony ny zava -bitany ong Madasun teto amin’ny kaomina Fihaonana ny filohany antoko politika Maeva ka nijerena akaiky ny fambolena hazo paulownia .
Ny kaomina fihaonana moa dia kaomina nofidina manokana hanatanterahina fotodrafitr’asa fitaratra amin’ny alalany fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra ary anisany sehatra laharam-pahamehana tsy maintsy jerena haingana ny fiahiana ireo tantsaha .
Variana any antanan-dehibe ny olona ka tsy mahita fa ety ambanivohitra no tena fanalahidiny fampandrosoana sy tena vahaolana amin’ny ady amin’ny fahantrana hoy hatrany Atoa Mamy Raharimanana .
izany akory tsy midika fa tsy laharam-pahamehana ny sehatra hafa fa tsy maintsy ho jerena miaraka avokoa ireo rehetra ireo saingy maika ny ety amin’ny tontolo ambanivohitra .
tsy mbola nisy ihany koa teto mpitondra nanao laharam-pahamehana niahy sy nijery ny olany tantsaha hatramin’izay
← Vinavina ny mety ho rotsakorana:
SIM : Le label MALAGASY NY ANTSIKA →
21 décembre 2016 Madagascar Informations 0